Puntland oo badbaadisay 14 bad-maax oo ay afduub u haysteen burcad badeed Somali ah. – Radio Daljir
Garowe, Aug 02 – 14 bad-maax oo ka mid ahaa shaqaalaha markab ay horaantii sanadkii 2010 afduubeen koox burcad badeed Somali ah ayaa la badbaadiyey sida uu saxaafadda u sheegey Agaasimaha la-dagaalanka burcad badeedda ee Puntland C/risaaq Maxamed Dirir ‘Ducaysane’.
Md. Ducaysane oo shir jaraa’ad ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegey in ay dawladda Puntland ku guulaysatay siidanynta 14-ka bad-maax ee u dhashay wadanka Thailand, kuwaas oo mudo gacanta ugu jirey koox burcad badeed Somali ah.
Md. Ducaysane waxaa uu tilmaamay in badbaadinta raggaasi ay gacan weyn ka geysteen odayaasha dhaqanka ee ku sugnaa goobaha lagu haystey oo kala ahaa Ceel-dhanaan & Garacad ee gobolka Mudug.
Waxaa uu intaas ku daray in ay jiraan 5 bad-maax oo ay weli afduub u haystaan burcad badeeddu, halka 6 kalena ay geeriyoodeen intii ay burcad badeedu afduubka u haysteen.
14-ka bad-maax, oo ay afduub u haysteen koox burcad badeed Somali ah in ka badan sannad, ayaa hadda ku sugan Garowe iyaga oo bed qaba, lagu wareejiyey hay’adaha samafalka, loona gudbin doono Nairobi oo deetana lagu wareejin doono safaarada dalka Thailand.
Badbaadinta 14-ka bad-maax ayaa qayb ka ah barnaamijka la-dagaalanka burcad badeeda ee ay Puntland kula dagaalamayso kooxaha burcad badeeda ah ee ka ugaadha xeebaha Somaliya.
Cabid Xasan Awoowe,